FARRIIN: Xeer cusub oo khuseeynaya kaararka lacagta lagu bixiyo oo hirgalay! (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka FARRIIN: Xeer cusub oo khuseeynaya kaararka lacagta lagu bixiyo oo hirgalay! (Dhegeyso)
FARRIIN: Xeer cusub oo khuseeynaya kaararka lacagta lagu bixiyo oo hirgalay! (Dhegeyso)
(Brusells) 16 Sebt 2019 – Laga bilaabo maalintii sabtida bishuna ahayd 14-kii sebteember ayuu si loo adkeeyo ammaanka ka hirgalay dhammaan waddamada EU xeer guud ee la xiriira habka adeegyada kaar ku bixinta lacagaha iyo sidoo kale biilalaka iyo kharashaadka lagu bixiyo internet.
Waxaa kaloo aad ku khasbanaan kari doontaa inaad mararka qaarkood afrat lambar isticmaasho xitaa kolka aad kaarka saarto mashiinnada markiiba akhriya ee kharashka lagu bixiyo. Kolka laga hadleyo internet-ka waxaa suurtagal noqon doona oo keliya in kharashaadka lagu bixiyo habab la sugey, sida bank-id ama mashiinnada yar yar ee kaararka akhriya – kortläsare.
”Wax warbixin oo nalaga siiyay ma jirto. Dhammaan shaqaalaha goobta aan ka wada shaqeeyno ma jirto cid igala hadashay inuu xeer cusub hirgalay,” sida ay sheegtay Alice Damirjian oo ka howlgaleeysay dukaan buugagta ka ganacsada ee ku yaala magaalada Stockholm oo u warrantay laanta wararka Ekot.
”May, waxba kalama aanan socon, sida ay sheegtay Linnea Björklund oo ka howlgasha dukaan roodhida iyo macmacaanka lagu iibiyo magaalada Stockholm.
”U maleeyn maayo inuu isbedelkani caqabad ku noqdo macaamiisha. Sweden waa waddan aad ugu hor u maray. Waxay ila tahay in aannu diyaar u nahay adeeggan, rajadeeyduna waxay tahay in aannu keeni doonin caqabado ballaaran xaaladda iminka,” sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleDhaqaalaha Kenya oo la sheegay inuu burburayo haddii… (Somalia oo ay arrin halis ah kala mid tahay)
Next articleWAA CIIDAN, MAYEE WAA CALEEN! Muuqaalka unugyo ka tirsan Komaandooska Somalia oo tababar ku jira + Sawirro